I-ActiveConversion: Khomba futhi ulandelele izivakashi zeWebhu | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 4, i-2014 Douglas Karr
I-ActiveConversion isoftware yokuhola ehamba phambili yamabhizinisi amancane kuya kwaphakathi. Izixazululo zabo zokuthengisa nokumaketha zivumela izinkampani ukuthi zikhombe izivakashi ezinentshisekelo, izinkampani nemikhombandlela efanelekayo evakashela isiza sakho. Imibiko ehleliwe yemikhombandlela efanelekayo ingathunyelwa kuthimba lakho lokuthengisa ukubazisa ngamathemba asebenza kakhulu ku-inthanethi.
I-ActiveConversionUbuchwepheshe bokulandela umkhondo bungacacisa umsebenzi womamukeli wokumaketha we-imeyili kanye nezimpendulo kokunikezwa nge-imeyili. Isixazululo singanikeza nokuqondisisa kuzo zonke iziteshi zemikhankaso yakho yokumaketha kufaka phakathi ukumaketha kwakho okuku-inthanethi, ukuphrinta izikhangiso, ukusakaza imidiya, nokuqondisa izivakashi kuwebhusayithi noma ekhasini lokufika.
I-imeyili yabo ezenzakalelayo, i-ProspectAlert, inikezela ngombono wezentengiso wolwazi lokuhola ngaphakathi kwe-ActiveConversion. Imininingwane eyinhloko inikezwa abathengisi bakho abathembele kumathemba ababelwe wona. Uhlelo luhlangana ne-Salesforce.com noma iMicrosoft Dynamics kepha i-CRM ayidingekile - iqembu lakho lokuthengisa lingangena ngemvume ngqo ukuze libone lonke ulwazi oluqoqiwe.
Tags: ukuguqulwa okusebenzayokhomba imikhondokhomba izivakashiMicrosoft DynamicssalesforceUmazisi wesivakashi